थपियो बज्र`पात: विमान दुर्घ`टना हुँदा १४ जनाको मृ’त्यु, ! – Dainik Sangalo
September 3, 2020 505
कोलम्बियामा एउटा विमान दुर्घ`टना हुँदा १४ जनाको मृ`त्यु भएको छ । भिल्लाभिसेन्सियो बाट ताराइरा जाँदै गरेको डाउग्लास डीसी–थ्री विमान दुर्घ`टनामा परेको हो । ३० सिट क्षमताको विमान प्राविधिक खरावीका कारण दुर्घ`टना भएको हो । विमानमा चालकले प्राविधिक समस्या आएको जानकारी दिएल`गत्तै विमान सम्पर्क विही`न भएको थियो । त्यसको एक घण्टा पछि विमान दुर्घटना`ग्रस्त अवस्था`मा फेला परेको अधि`कारीहरुले जनाएका छन् । कोलम्बियामा एउटा विमान दुर्घ`टना हुँदा १४ जनाको मृ`त्यु भएको छ । एजेन्सी ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यो पनि, कुमाखमा रहेको सिद्ध गुफा निकै रमणीय छ । स्थानीय बासिन्दा कर्ण चलाउनेले अवलोकन र पूजाआराधनाका लागि थुप्रै मानिस गुफामा आउने बताए । ‘हरेक गुफामा रहेका विभिन्न खालका आकृति असाध्यै सुन्दर छन्,’ उनले भने । स्थानीयले कुमाखमा रहेको गुफाबाट पठाएका कुकुरहरू बाँझकाँडाको मोख्ला र कालागाउँको थदरामा रहेको गुफाबाट निस्किएकाले यहाँका गुफा निकै लामा भएको अनुमान गरिन्छ ।
‘बूढापाकाले गुफाको लम्बाइ पत्ता लगाउन ककुर पठाएको सुनाएका थिए,’ जिमालीका लीलाधर रेग्मीले भने, ‘तर, गुफाको ५० मिटरभन्दा तल कोही गएका छैनन् ।’ कुमाखको टुप्पोबाट १५ जिल्लाका भूभाग देख्न सकिन्छ । यहाँबाट भारतको रुपैडिहासम्म देख्न सकिन्छ । कुमाख पहाडमा उच्च पहाडी जंगलमा पाइने महत्वपूर्ण जडीबुटी, वनस्पति र फूल पाइन्छन् । त्यस्तै, दुर्लभ मानिएका चराचुरुंगी र जंगली जनावर पनि यहाँ पाइन्छन् ।
Prevदु’ख’द खबर: श्रीमतीले डि’भो’र्सको लागि द’बा’ब दिदा डा. शाहले गरे ८ तला माथिबाट कु’दे’र आ’त्म’ह’त्या
Next१० जनाको शव फेला, ४१ बेपत्ता खराब मौसमले घटनास्थल गएको गृहमन्त्रीसहितको टोली फर्कियो
कैलालीबाट वे,प,त्ता भएका २ बालक कञ्चनपरमा भेटिए, २ को अवस्था अ,ज्ञा,त